Amalungelo afana namaLungelo akhethekileyo - Ukulingana koLuntu
Ukuqinisekisa ukulingana koLuntu akuthethi ukunikezela ngamalungelo akhethekileyo
Imbango eqhelekileyo yamaKristu Inyaniso malunga nokukhusela amalungelo omtshato oluntu olusisiseko kukuba i-gay ifuna amalungelo "akhethekileyo" ayitholakali kwabanye. Oku akuyinyani, kodwa kunamandla kunye neengxolo ezikholisa. Kukhohlisayo kuba ukuba nayiphi na iqela laseMerika lizuza kwaye likhusela amalungelo akhethekileyo ngokwawo, ngamakholwa enkolo. Kutheni amaKristu enqabisa ukuthintela kwiingcingo ezingenakuze zamukele?
Iimeko ezizodwa zeGays
Ubume bodwa "obukhethekileyo" ubungqingili bezintlu zintlonelo kunokuba zifune: zingakhuselekanga ngokupheleleyo nguMgaqo-siseko. Kwiindawo ezininzi, abantu abasenayo imingcipheko engekho mthethweni ekukhutshweni komsebenzi, ukukhushulwa, okanye izindlu nje ngenxa yokuba bayingqingili. Abanye bahamba ngokuya kuthi "ilungelo lenkolo" ukungafuni ukubonelela unyango olufanayo kunye nabangqingili njengokuba benza ukuxhatshazwa.
Kukhokelela ukuba le ngongoma yokulondolozwa kwesigwebo esithandana ngokwesini-enye yamalungelo ambalwa ahlalayo namhlanje. Ilungelo lamadoda, lamaKristu kunye nenkolo lonke lihlaselwa phantsi kwekhulu lama-20, kwaye kwiiyure ezihlukeneyo, zonke ziye zatshatyalaliswa. Ikamva labo liqinisekile; Ilungelo lomntu oyedwa, nangona kunjalo, libonakala likhuselekile - alilondekanga ngokupheleleyo, isihlobo esilungeleleneyo esilungileyo nakwezinye iilungelo.
Kutheni ngabantu abathile kufuneka bazive bephakamileyo kunomntu ... nabani na?
Kukho amadoda adinga abafazi ukuba bangaphantsi, amaKristu adinga abangewona maKristu ukuba angaphantsi, amakholwa enkolo afuna abantu abangakholwayo nabangakholelwa kuThixo ukuba bangaphantsi, abemi abafuna abantu bezinye izizwe ukuba bangaphantsi ... kunye nabantu abathandana nabo abafuna i-gay ukuba ibe ngaphantsi. Kutheni abantu abanokuhlukileyo abanako ukulingana kwiintlukwano zabo?
Iimpawu ezinokungqinelaniyo ngokuchasene nokuziphatha
Izikhalazo malunga "namalungelo akhethekileyo" abantu basetyhini bahlala bexhomekeke ekuchasaneni phakathi kobufana besini kunye nemigangatho efana nesini kunye nohlanga. Ubulili kunye nohlanga akunakukhethwa, ngoko kuyacaca ukunqanda ukubandlululwa ngenxa yabo. Ubungqingili, bathi, yindlela yokuphila engafanelanga ukukhuselwa okufanayo. Oluphando oluninzi lubonisa ubungqingili ukuba bangabi lukhethi alukho nto - ngenye into kuba bachaza ubungqingili njengendlela yokuziphatha ngokwesondo ngokobulili obufanayo, kungekhona njengento yokukhangela ngesondo esifanayo.
Nangona ukuba ubungqingili bakhethwa, nangona kunjalo, ingxabano yamalungelo "okhethekileyo" iya kusebenza ngokulinganayo nenkolo. Imfundiso ayinakukhethwa ngokwenza intando, kodwa iquka ukuziphatha kwaye ayinakuguqulwa njengoluhlanga okanye ngesini. Inkolo ngokuqinisekileyo imalunga nokuziphatha nokuphila kunye nobungqingili, ukuba akunjalo. Ngaloo ndlela, ingxabano yomgaqo osetyenziswayo yiLungelo lobuKristu apha liya kukhanyela ukukhuselwa kocalucalulo kumakholwa enkolo.
Ilungelo lobuKristu mhlawumbi alucingi ukuba ulwahlulo olunjalo lusemthethweni okanye lusebenza ngokusemthethweni njengomgaqo jikelele; Kunoko, babona i-gay njengento enyanyekayo ukuba bahlale ngaphakathi kwiiparameters eziqhelekileyo zomthetho nokuziphatha.
Ama-Gay angabantu abangaphantsi abaphilileyo kangangokuthi akufanele baphathwe njengalingani.
Amalungelo akhethekileyo kwabakholwayo benkolo
Okumangalisayo kukuba, kukho iklasi "lamalungelo akhethekileyo" eMelika - kodwa kumakholwa enkolo, kungekhona abantu abathandanayo. Ukuba umntu unenkolelo yokwenyaniso yokwenyaniso, banokufaka isicelo-kwaye kaninzi banikezelwa - ukuxolelwa kumthetho osebenza ngokuthe ngqo kunye nokungathathi hlangothi. Abaqeshi, nabo, bafuneka ukuba bafumane iinkolelo zonqulo zabantu nokuba oko kuthetha ukuwakhulula ekusebenzeni ngokubanzi, imithetho engekho emthethweni kwindawo yokusebenzela.
Amakholwa enkolo anandipha uluhlu olubanzi lwamalungelo akhethekileyo kunye namalungelo awunakuthola kwabanye abangafuna ukuxolelwa ngenxa yezizathu ezingekho zonqulo; kodwa ezinye zeenkokeli zonqulo ezifanayo zihlambalaza ngeentlobano ezifuna "amalungelo akhethekileyo" ngokwabo - amalungelo anelungelo elingaphezulu kwelokhuseleko olukhuselekileyo olwenziwa ngabantu bonke.
Xa amaKristu efuna ukukhululwa kwimithetho wonke umntu kufuneka alandele, bafuna nje ukuba banakho ukuqhuba inkolo yabo ngokukhululeka; xa ama-gay afuna ukukwazi ukusebenza kunye nokuthenga ngaphandle kokubandlululwa, bafuna amalungelo "akhethekileyo" ngokungekho sikweni.
Amalungelo akhethekileyo kunye namalungelo alinganayo
Xa izibini zentlupheko zilwela ilungelo lokutshata, ngaba zifuna amalungelo alinganayo okanye amalungelo akhethekileyo? Babefuna amalungelo afanayo nezinye izibini, kodwa abagciniweyo baxininisa babefuna amalungelo akhethekileyo. Emva koko, akukho mntu wavunyelwa ukutshata amalungu omnye uhlanga, ngoko bonke baphathwa ngokulinganayo. Kunene?
Kukuhlambalaza ukuxelela abantu ukuba umnqweno wokunwabela amalungelo afanayo njengamanye amaMerika ngokwenene unomnqweno wokuba "amalungelo akhethekileyo" ayitholakali kwabanye. Kungenzeka ukuba amanye amaKristu aqwalasele ukuhlaziywa kwezindlu, imisebenzi, kunye nokunakekelwa kwezonyango ukuba "ziimfuno ezingavamile" - ubuncinane, xa kuziwa kubafazi. Ubungqingili bugwetywe nguThixo, ngoko mhlawumbi abafanelanga ukufumana umsebenzi, ukuthenga ukutya, okanye ukufumana indawo yokuhlala njengabanye abemi.
Izinto Ezifanele Uzazi Ngomdali Omkhulu WamaLate uLincoln Peirce
Ngaba I-Vedic Astrology Ingachaza Ikusasa?
Iimfazwe ezinkulu kunye neengxabano ze-20 leminyaka
UkuQiniseka koLwazi oluMandla lwabaSwina
ISt. Gall, iStron Saint of Birds
Iingcebiso zeZiko eziPhambili ze-Skateboarder
U-Shawna noKeifer Thompson Yenza i-Great (Country) Music Together